ဒသေခံဟငျးလြာ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ဒသေခံဟငျးလြာ
Updated: 2017-01-12 13:10
ကြက် သား ကင်
အရည် အသွေး မြင့် ပြီး မွေး မြူ ရေး နည်း လမ်း ကျမ်း မာရေး နဲ့ ညီ တဲ့ အစာ အဟာရ တွေ နဲ့ မွေး ထား တဲ့ မိ ရဇခိ ရဲ့ ကြက် သားေ တွ က ရိုး ရှင်း ပေမယ့် အလွန် ကို အရသာ ပြည့် စုံ ကောင်း မွန် လှ ပါ တယ်. စရှိ မိ ၊...
Updated: 2016-11-17 14:59
နိခုမာခိ အို နိဂိရိ ( အသား လိပ် ပေါင်း )
အို နိဂိရိ ( ထမင်း ဆုပ် ) ကို အချဉ် ရည် နဲ့ အရသာ ပေါင်း စပ် ပြီး ၀က် သား နဲ့ ပတ် ထား ပြီး အနံ့ လေး သင်း လာ အောင် ကင်ထား တဲ့ မီယာဇာ ခိ ရဲ့ မူ ပိုင် အရသာ အိုနိဂိရိ။ ကြည့်ရင် အသား ကင်ပတ်ထား တာ...
Updated: 2016-09-13 15:19
ဆိုင်အတွင်း ကို ၀င်သွားလိုက် ပြီ ဆိုရင်ပဲ ၊ နံရံ တွင် ကော်ဖီ ခွက် လှလှ လေးတွေ ၂၀၀၀ ခန့် ကို တန်း စီထား တာကို သင်တွေ့ ပြီး အံ့သြသွားမှာ သေချာပါတယ်။ အာရိတာ အိုးဖုတ် လုပ်ငန်း က ဆေးရောင်စုံလေး တွေ နဲ့ လှပ...
Updated: 2016-09-12 16:35
ခါရစွတ် ကားလေးနဲ့ ရောင်းတဲ့ ဟမ်ဘာဂါ
ခါရစွတ် မြို့ ရဲ့ နာမည်ကြီး နေရာ ( နိဂျိနော့ မာစွတ်ဘာရ) မှာ ရှိ ပြီး ၊ နှစ်ပေါင်းကြာမြင့် နေပြီး ဖြစ်သော ဟမ်ဘာဂါဆိုင်။ ဘတ်စ်ကား အသေး ကို ပြန်လည် ပြု ပြင် ကာ ၊ ကားဘော်ဒီ တွင် ( ခါရစွတ် ဟမ်...
Updated: 2016-08-18 10:01
ဖုခုအိုကမြို့ရဲ့ဒေသအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မို့ဆု(ခေါ်) နွား၊၀က်အူကို အသုံးပြုပြီး ဂေါ်ဖီထုပ်၊ကြက်သွန်မိတ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြင့် ချက်ထားသော ဟော့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်။ အရသာအတွက် ဒေသထွက်င...
Updated: 2016-08-17 09:36
ဂမဲနိဟာ ဖုခုအိုကရဲ့ဒေသထွက်အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြက်၊ ဂေါ်ဘိုး၊ မှို၊ ကြာမြစ်၊ မုန်လာဥနီ၊ မျှစ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် ကွန်းဂျက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ မိရင်း၊ ရှောယုနှင့် သကြားတို့ဖြင့်အရ...
Updated: 2016-07-07 15:31
ခုဂျီရာ ရောကန် ( ပဲသီးချို ဂျပန် ဂျယ်လီ)
ဆန်မှုန့် ကို ကြိတ် အန်းကော လို့ ခေါ် တဲ့ အနှစ် အချိန် နဲ့ အတွင်း မှာ ထည့် ပြီး တော့ ပေါင်း ထား တဲ့ ဂျပန် ရိုးရာ မုန့် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၅ ဆက်မြောက် ရှိမဇု ဘုရင် က ငယ်ငယ်တုန်း က သူ့ ရဲ့ အထိန်း တော် ကို ဇွတ်...
Updated: 2016-07-05 16:17
ခူမမိုတို မါဂေါစာဘူရော အသားကင်စားသောက်ဆိုင်
တန်ဖိုးကြီး သော အမဲရောင် ဂျပန် အမဲသား ကို အသုံးပြုထား ပါသည်။ အသားကင်များ အပြင် ၊ အိမ်တွင်းလုပ် ၀က်အူချောင်း၊ နှင့် အတွင်း ကလီစာ အစား အစာ မျိုး စုံ တို့ ကို မှာ ယူ စားသုံး နိုင် တဲ့ အသား ကင် စားသောက...
Updated: 2016-07-05 16:06
ဆလတ်ရွက် ရေညှိ ထမင်းလိပ်
မီရဇခိ် မှာ မှာ စတင် ပေါ် ပေါက် လာ တဲ့ ဆလတ်ရွက် ရေညှိ ထမင်းလိပ် ဟာ ၊ ပုံမှန် ( မာခိ ဆူရှီ ) ရေညှိ ထမင်းလိပ် ပုံ စံ ဖြစ် ပေမယ့် အတွင်း မှာ ထည့် လိပ် ထား တဲ့ အစာ တွေ က တော့ ဆလတ်ရွက် ရယ် ပုဇွန် နဲ့ မာရော်...
Updated: 2016-07-05 14:40
Cheese manjyu ချီးစ် ဒိန်ခဲ ပေါက် စီ ( ဂျပန် )
မီရာဇခိ မှာ မွေးဖွား လာ တဲ့ ဒီ ချီးစ် ဒိန်ခဲပေါက် စီ ကို အခု မှာတော့ မီရာဇခိ ကနေ တစ် နိုင်ငံ လုံး အတိုင်းအတာ နဲ့ အရာသာရှိသော စားစရာ မုန့် ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။ ဒိန်ခဲပေါက်စီ ဟာ မီရာဇခိ မြို့ ရဲ့ ဒေသတွင်း ရ...